Kamiin Ka Dhacay Galgaduud Oo Ay Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqdeen In Ka Badan 10 Askari – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Kamiin Ka Dhacay Galgaduud Oo Ay Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqdeen In Ka Badan 10 Askari
Last updated Jul 4, 2021 268 0
Ciidamo aad uhubaysan oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saaka weerar kamiin ah la baeegsaday kolonyo ay la socdeen askar katirsan DF kuwaas oo ku socdaalayay qeybo kamid ah gobalka Galgaduud.
Kamiinkaan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhaxaysa deegaanka Ceeldheer iyo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobalka Galgaduud, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo la gaarsiiyay ciidamada.
Inta la xaqiijiyay 7 askari oo katirsan ciidankii marti galiyay weerarka dhabagalka ah islamarkaana uu ku jiro sarkaal ka tirsan askarta Gorgor ayaa lagu dilay weerarkaan halka lagu dhaawacay 8 kale.
Kolonyada weerarka lala beegsaday ayaa si lama filaan ah ugu dhacay kamiinka, waxaana ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab u suura gashay inay gaarsiiyaan khasaare kala duwan.
Ciidamada lagu dilay weerarka iyo kuwa lagu dhaawacay ayaa u badnaa askarta wata magaca shimbirka Gorgorka, kuwaas oo uu soo taba baray Turkiga oo qeyb ka ah duullaanka ay shisheeyaha ku soo qaadeen dalka.
Ciidamada Gorgor ayaa mudooyinkii la soo dhaafay waxay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab kala kulmiyeen dhiigbax joogta ah, waxaana waqtiyo aan sidaa ukala fuleen siyaabo kala duwan loogu beegsaday gobalka Sh/dhexe, halkaas oo looga dilay askar fara badan loogana dhaawacay tiro kale.